ESI GBANYỤỌ MA Ọ BỤ WEPU NCHỌGHARỊ NYOCHAA WEEBỤ? - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi gbanyụọ ma ọ bụ wepu nchọgharị nyochaa weebụ?
Ekele ndị niile na-agụ akwụkwọ!
Ọ bụrụ na anyị ewere ọnụọgụ nke Onwe anyị maka ihe nchọgharị, ọ bụ naanị pasent 5% (ndị ọzọ) nke ndị ọrụ na-eji Internet Explorer. Maka ndị ọzọ, mgbe ụfọdụ ọ na-emetụ ya aka: dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ, ọ na-ebido n'amaghị ama, mepee ụdị ntanetị niile, ọbụlagodi mgbe ịhọrọla nchọgharị dị iche site na ndabara.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị na-eche, sị: "esi agbagha, mana ọ ka mma iji wepụ ihe nchọgharị weebụ nyochaa kpamkpam?".
I nweghị ike ihichapụ ya kpamkpam, ma ị nwere ike iwepu ya, ọ gaghị agakwa ọzọ ma ọ bụ mepee taabụ ruo mgbe ịgbanyere ya ọzọ. Ya mere, ka anyi malite ...
(A nwalere usoro a na Windows 7, 8, 8.1. Na tiori, ọ ga-arụ ọrụ na Windows XP)
1) Gaa na nchịkwa Windows ma pịa "mmemme".
2) Na-aga n'ihu, gaa na mpaghara "Kwado ma ọ bụ gbanyụọ Windows components." Site n'ụzọ, ị chọrọ ikike nchịkwa.
3) Na windo nke mepeere Windows, chọta akara na ihe nchọgharị. N'okwu m, ọ bụ mbipute nke "Internet Explorer 11", na PC gị nwere ike ịnwe nsụgharị 10 ma ọ bụ 9.
Debe igbe dị n'akụkụ nchọgharị Internet Explorer (ọzọ n'ime edemede IE).
4) Windows dọrọ anyị aka ná ntị na imebi usoro a nwere ike imetụta ọrụ nke ndị ọzọ. Site na ahụmịhe nke onwe (ma napụla m ihe nchọgharị a na PC m ruo oge ụfọdụ), enwere m ike ịsị na enweghi mmehie ma ọ bụ mkpọka nke usoro ahụ. N'ụzọ dị iche, otu ugboro ọzọ ị gaghị ahụ mkpọtụ nke mgbasa ozi mgbe ị na-etinye ngwa dịgasị iche iche na-ahazi ahazi iji malite IE.
N'ezie mgbe iwepụ akara akara n'ihu Internet Explorer - chekwaa ntọala ma malitegharịa kọmputa ahụ. Mgbe nke a gasịrị, IE agaghịzi amalite ma gbochie ya.
Site n'ụzọ, ọ dị mkpa iburu otu ihe. Gbanyụọ IE mgbe ị nwere ọ dịkarịa ala otu nchọgharị ọzọ na kọmputa gị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere naanị IE nchọgharị, mgbe ị gbanyụrụ ya, naanị ị gaghị enwe ike ịme nchọgharị na ibe Ịntanetị, na n'ozuzu, ọ bụ nsogbu dị ukwuu ibudata ihe nchọgharị ọzọ ma ọ bụ mmemme (ọ bụ ezie na ọ dịghị onye weghaara FTP sava na netwọk P2P) mana ọtụtụ ndị ọrụ, echere m, agaghị enwe ike ịhazi ma budata ha na-enweghị nkọwa, nke ọzọ ịchọrọ ile anya na saịtị ụfọdụ). Lee oke egwu a ...
Nke ahụ bụ ihe niile, niile nwere obi ụtọ!